Nzira Dzinokurumidza uye Dziri Nyore Kupfuura Yako Saiti | Martech Zone
Kuburikidza nemupi wedu wekutambira, ndakaziviswa CloudFlare. Ini ndakakatyamadzwa chose chose nebasa ... kunyanya mutengo wekutanga (mahara). Pandaishandira mukuru SaaS Provider, isu takagadzira geocaching masevhisi uye zvakatibhadharira makumi ezviuru zvemadhora pamwedzi. CloudFlare haina kuvakirwa SaaS Provider, asi yakakwana kune yako webhusaiti kana blog.
CloudFlare ibasa rinoshandisa tekinoroji yekutengesa kuita kuti mawebhusaiti amhanye akachengeteka uye nekukurumidza kutenderera pasirese. CloudFlare parizvino inomhanya gumi nemaviri data nzvimbo (iine zvakawanda munzira) pamakondinendi matatu ekupa izvo zvimisikidzo zvemukati caching, botira kusefa uye nezvimwe. Heino pfupiso yebasa racho:
Iyo sevhisi yatove inonakidza ye Martech Zone. Tarisa uone iyo analytics pazasi, kunyanya kune machati ari pazasi pemishumo.
Ndisati ndashandisa CloudFlare, ini ndaipfuurisa kumwe kushomeka kwekushandisa pane yangu yekubata account. CloudFlare yakacheka iko kushandiswa muhafu - ichitora hafu yemiriyoni peji maonero uye kuchengetedza pamusoro pe5bb yebandwidth. Kana iwe uchinge uchida kuziva kuti masisitimu aya anoita sei izvi… iyo nzvimbo yedata inomisikidzwa mudunhu rakatenderedza nyika. Kana mumwe munhu ari munharaunda akakumbira peji rako, peji racho rinochengetwa munharaunda. Kana munhu anotevera achishanya - pane kuti ushumire kubva kuseva yako zvakare, iyo yemuno CloudFlare dhata nzvimbo inoshumira peji.
Uye zvakare, kubvira ndichishandisa sevhisi, ndakaona kudzikiswa kukuru kweBOT SPAM ichiendesa zvirevo. Zvinoita sekunge CloudFlare irikuita basa rakakura pakuvharira iwo traffic kubva pakusvika kuseva futi. Iko chete kushoropodza kwandingawana pawebhu nezve CloudFlare ndeyekuti havashande mapeji nekukurumidza; zvisinei, ini handina kuona chero latency uye wandinogamuchira ari kunze kweCalifornia.
Kana iwe uchimhanyisa blog, webhusaiti kana ecommerce application uye usingakwanise kuwana budiriro ye cache inogoneswa, kana epamusoro-magumo caching masevhisi saAkamai… iyi ndiyo mhinduro kwayo iwe! Peji yekuremerwa nguva yakakosha pakuwedzera kudzvanya-kuburikidza nemitero uye chinzvimbo pane enjini dzekutsvaga. Vaviri DNS shanduko (idzo dzakanyorwa zvakanaka) uye iwe unomuka uye unomhanya neCloudFlare!
Tags: tsumogooddatanhoroondohoterasei marongerwo bhajetipasocial media budgetmamiriro enzangaapp yemoto wemusango
TweetTwo: Meseji Yakarurama, Nguva Yakakodzera, Nzvimbo Yakarurama
Aug 30, 2011 na4: 56 PM
Ndanga ndichishandisa Cloudflare kubva muchirimo uye ndawana chinhu chimwe chete ichocho. Zvave zvakanaka kumhanyisa masosi uye mune mukana mukana webhusaiti yako kuti iende pasi vanogona kuchengeta vhezheni yacho pamhepo kwenguva diki. Icho chinofanirwa kuve nebasa rewebsite yega mazuva ano.